ALAKAMISY 9 AVRILY 2020
BEN’NY TANANA SY MPANOLOTSAINA : Hotanterahina ny 27 Novambra izao ny fifidianana
Tapaka fa ny 27 novambra izao no hotanterahina ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina Kaominaly. Nisy ireo didim-panjakana noraisina nandritra ny filan-kevitry ny governemanta nandraisana io fanapahan-kevitra io. 16 août 2019
Nanolotra tetiandro faharoa hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina Kaominaly ny teo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Ny alarobia 27 novambra indray no vinavina napetrak’izy ireo hanatontosana.
Avy hatrany dia nasiana fankatoavana tao anatin’ny filan-kevitry ny governemanta izay notanterahina ny harivan’ny 14 aogositra lasa teo io tetiandrom-pifidianana naroson’ny Ceni io. Nisy ihany koa ankoatra izay ny fankatoavana didim-panjakana miisa telo mifandraika amin’izay fiatrehana ny fifidianana izay. Navoaka avy hatrany didim-panjakana manaika ny mpifidy ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainan’ny tanàna ho an’ireo kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy.
Nisy ihany koa ny didim-panjakana mamaritra ny fomba hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainan’ny tanàna ho an’ireo kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Ary farany ny didim-panjakana mamaritra ny fandraisana anjara ara-bolan’ireo kandida sy ny lisitry ny kandida amin’ny saram-panontana ny biletàm-pifidianana amin’ny fifidianana ho an’ireo kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Mamaritra koa ny fomba famerenana io fandraisana anjara io ho an’ireo kandida mahafeno ny fepetra. Mahakasika ity farany manokana dia nambaran’ny Ceni fa misy fahasamihafana araka ny sokajin’ny Kaominina tsirairay avy ny antoka ara-bolana aloan’ireo Kandidà.
Raha ho an’ny Kaominina Antananarivo renivohitra manokana dia mitentina dimy tapitrisa Ariary izany vola izany. Ho an’ireo Kaominina ambonivohitra sokajy voalohany dia dimy hetsy sy roa tapitrisa Ariary no aloan’ireo kandidà. Ho an’ireo Kaominina ambanivohitra kosa indray dia mizara roa ka ho an’ny Kaominina manana mpanolotsaina fito dia dimy alina sy telo hetsy Ariary ary ho an’ny Kaominina tsy manana mpanolotsaina afa-tsy dimy dia telo hetsy Ariary. Nanamarika ny Ceni fa fifidianana roa no hatao, noho izany antoko ara-bola roa samy hafa. Mandoa vola hafa ilay ben’ny tanàna ary mandoa vola hafa ihany koa ny lisitra iray amin’ireo mpanolotsaina.
Efa miomana amin’ny fametrahana ny dosie
Taorian’ny namoahan’ny governemanta an’ireo didim-panjakana ireo dia nametraka ny Ceni fa tokony efa hiomana amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany ireo maniry ho kandidà ben’ny tanàna sy mpanolo-tsain’ny tanàna. Araka ny tetiandro napetraka dia hanomboka ny 29 aogositra amin’ny 9 maraina ny fametrahana izay dosie filatsahan-kofidiana izay ary hikatona hatramin’ny 12 septambra. Dimy andro aorian’io, izany hoe ny 17 septambra no hamoaka amin’ny fomba ofisialy ny lisitr’ireo kandidà nahazo fankatoavana ny Ceni.
Hanana 21 andro avy eo ireo kandidà nekena hanatanterahana ny fampielezan-kevitra sy handresen-dahatra ny mpifidy. Hanomboka ny talata 5 novambra amin’ny 6 ora maraina izany ary hifarana ny 25 novambra misasak’alina. Mandritra io fe-potoana io dia mipetraka hatrany ireo fepetra takina amin’ireo kandidà ho fanajana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ny kara-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka ihany no ampiasaina amin’iny fifidianana Kaominaly io.
Nogadraina vonjimaika ilay ramatoabe nampijaly ny zafikeliny tao Mampikony VONO SY HERISETRA (159) 6 avril 2020 Miisa 06 ny maty hita nitsirara teny an-dalana nandritra ny volana marsa TETO AN-DRENIVOHITRA (127) 6 avril 2020 "Aleo ampandeferina aloha ny tombontsoa manokana hiarovana ny vahoaka" GOVERNORAN’NY FARITRA SOFIA (110) 6 avril 2020 Tsy nahitana soritr’aretina coronavirus ireo olona 24 tonga avy any ivelany FARITRA SAVA (75) 6 avril 2020 Dahalo 02 sy lehilahy 02 mpividy omby halatra voasambotry ny zandary ANTSIRANANA (72) 6 avril 2020 Miitatra 15 andro ny fihibohana an-trano ADY AMIN’NY « CORONAVIRUS » (55) 6 avril 2020